सबै चोकहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो र सायद सबैभन्दा प्रख्यात पनि, नासल चोकमा, र यस चोकमा रहेको दबलीमा, पहिले शाहकालमा राज्यारोहण तथा राज्याभिषेक जस्ता महत्वपूर्ण शाही समारोहहरू आयोजना गरिन्थ्यो । आज भने नासल चोक धेरै सांस्कृतिक जात्रा, नृत्य, पर्व, तथा प्रदर्शनहरूको केन्द्र बिन्दुको रूपमा रहेको छ . . .
हनुमानढोका दरबारको सब भन्दा ठूलो आंगन नाकचोक नाटिएश्वर वा नासालेश्वर मन्दिरको नाममा राखिएको छ - यो मन्दिरको आँगनको पूर्वी भागमा रहेको भगवान नृत्य स्वरुपमा समर्पित मन्दिर हो। आंगन दुई ईर - शह र मल्ल - मा हनुमानढोका दरबारमा शासन गर्ने विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको थियो। मल्ल युगको बखत, यो मुख्यतया बैठक स्थानको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, जुन कि सार्वजनिक रूपमा राजाले आयोजना गरेको दर्शक वा विदेशी राजदूतहरू र शासकहरूसँग छलफल गर्ने हुन सक्छ। साथै, यो अवसरहरूमा शाही थिएटरको रूपमा पनि काम गर्‍यो - जुन नाट्येश्वर मन्दिरको स्थापनाको कारण हुनसक्दछ। शासकहरू सीसा बैठकमा बसेर नाच गर्ने विधिहरूको आनन्द उठाउँथे। यद्यपि शाह युगको दौडान, शाह राजाहरू राजदरबारको केन्द्रमा उपस्थित दबली वा उठाएको मञ्चलाई आफ्नो राज्याभिषेक समारोह आयोजना गर्ने ठाउँको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। यसको पछाडि कारण वास्तवमा एकदम पेचीला छ। इन्द्र जत्रको समयमा इन्द्रको मूर्ति डेगु तलेजु मन्दिरबाट ल्याइन्छ र दबलीमा राखिन्छ। राजा नेपाल पृथ्वीनारायण शाह, आधुनिक नेपालका बाबु, इन्द्र जत्रको दिनमा काठमाडौं राज्य जित्ने भएकोले नाक चौक चरा डाबलीलाई राज्याभिषेकको रूपमा प्रयोग गर्नु उसको दिमागको बच्चा हो। त्यसकारण हामी अनुमान लगाउन सक्छौं कि शाह शासकहरूले यस चतुर्भुजलाई मल्ल शासकहरूले भन्दा उच्च स्थानमा राखेका थिए।
वास्तुकलाको हिसाबले हेर्दा, नासाल चौकले मल्ला कला र वास्तुकलाको उत्कृष्ट सौन्दर्यको चर्चा गर्दछ। यहाँ उपस्थित प्रायः कलाकृतिहरू मल्ल कालदेखि आएका छन् यद्यपि वरपरका भवनहरू प्रायः शाह युगमा निर्माण गरिएका थिए। आँगनको उत्तरी भागमा अवस्थित नाकचोकको प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्ने बित्तिकै कसैले पनि देब्रेपट्टि सुन्दर ढved्गले कुर्केको ढोका देख्न सक्छ। मल्ल युगका कलाकारहरूको अतुलनीय वास्तुशिल्प दर्शाउने ढोका प्यानलमा जय र विजयका मूर्तिहरू (ती मल्ल शासकहरूको संरक्षक हुन् भन्ने विश्वास गरिन्छ) ढोका प्यानलमा उत्कृष्ट देवीदेवताहरू थिए। यस ढोकालाई भारी देवीदेवताले सजाइएको थियो किनकि यसले मल्ल शासकहरूको निजी कोठामा लग्यो जसले ती दुष्टहरूबाट ईश्वरीय सुरक्षाको प्रतीक थियो। एक जना काठको ढोकासँग मिल्दोजुल्दो अगाडि बढ्दै जाँदा आधा मान्छे, आधा सिंह देवता नरसिम्हाको उल्लेखनीय मूर्ति छ। वास्तवमा, दरबारको प्रत्येक खण्डको जटिलतामा लुकेका वास्तु सौन्दर्य शब्दहरूको परे छैन। उदाहरणका लागि, आंगनको पूर्वी बरामदमा रहेको महाविष्णु मूर्ति धातुको कामको उत्कृष्ट टुक्रा मध्ये एक मानिन्छ। वा सीसा बैठक, जुन सम्भवत एक मात्र गिलास डिजाईन निर्माण देश भरमा यसको निर्माणको समयमा भयो।
आज, यद्यपि शासकहरू बितिसकेका छन् र परिवर्तन भएका छन्, नाक चौक अझै प्रयोगमा छ। शाही सिंहासन, जुन राजाले प्रयोग गरे, अझै सीसा बैठकको भूतलमा सेता कपडाले ढाकिएको छ। बौद्ध भिक्षुहरू (पंच बुद्ध) अझै यहाँ आउँछन् र बसन्त पंचमीको चाडको समयमा सिंहासनमा पान र सुपारीहरू चढाउँदछन्, जुन उनीहरूको अनुष्ठानको एक भाग हो, जुन पिढि पुस्तासम्म चलिरहेको छ।
मोहन चोक (मोहनकाली चोक)
मल्ल राजाहरूको मुख्य वासस्थान मोहन चोकले यसको स्वर्ण धारा, चन्दवा, र ग्लोबका साथसाथै धातु, ढुङ्गा, र काठ तीनै मिडियाका माध्यमबाट मध्यकालीन कलाको उत्कृष्ट विशेषता चित्रण गर्दछ । यस चोकमा मल्ल राजाहरूले विदेशी देशका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रित गर्दथे, मित्रता र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दथे, र सन्धि-सम्झौताहरू पनि गर्दथे . . .
यो सबै हनुमानढोका परिसरको सबैभन्दा शानदार आंगन कहलाइनुको कारण यसको वास्तु सौन्दर्यबाट आउँछ - विशेष गरी आंगनको मध्यभागमा सुनौलो पानी टाउको। यो जमिन सतहबाट बाह्र फिट तल छ र यसले राजा बुद्धिलकण्ठको पहाडबाट हनुमानढोका दरबारमा ल्याइएको चिसो पानीका लागि प्रसाद मल्लको पानीको काम गर्‍यो। पानी टाउकोको वास्तु डिजाइन एक प्रकारको मानिन्छ। यसले मूर्तिकारको सपनाहरू साकार बनाएको छ जसले टाउकोको ड्या। निर्माण र सुसज्जित पार्‍यो: चराहरू र जनावरहरू पानीको मुनि दौडदै रम्फल्दै, डरले काम्दै आएका थिए। यसको साथसाथै यसले भगीरथको चित्रलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ, जो व्यक्ति गंगालाई पृथ्वीमा ल्याउने, उसको घुँडा अँगाल्ने र पोखरीको सतहभरि नाचाहरूको विचार गर्ने विचारको लागि जिम्मेवार व्यक्ति हो। साँच्चै, पानीको मुहानले जीवन र मानवताको गहिरो अर्थ झल्काउँछ। यसबाहेक, पानीको टुप्पोका पर्खालहरूले-thirty देवीदेवताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। राजा प्रताप मल्ल उत्सुक भक्त थिए; त्यसकारण, उनले हरेक बिहान यस पवित्र पानी टाउकोमा नुहाए र देवी-देवताहरूलाई प्रार्थना गरे।
मोहन चौक एक चोकवाथ शैलीमा निर्माण गरिएको छ (एक वास्तु डिजाइन जहाँ टावरहरू चतुर्भुजको कुनामा खडा छन्)। भवनहरू तीन तल्ले छन्, र पूर्वी भित्तामा एक शानदार सूर्य खिलो छ। भुईं फ्लोरको बरामदाहरूले कुशल कृष्ण कलाको प्रयोगबाट कृष्णको जीवनलाई कलात्मकरुपले प्रस्तुत गरेका छन्। चतुर्भुजका अन्य तीन सीमानाहरूका विपरीत, पश्चिमी भागमा कुनै बरामदा छैन। बरु, यसमा अस्थमात्रिकाको एक अखण्ड जीवन आकारको छवि हुन्छ, जसलाई मोहनकाली पनि भनिन्छ। यस मूर्तिकलालाई दरबारको सबैभन्दा अनौठो अंश मानिन्छ - विशेष गरी यो निर्माण भएको समयलाई विचार गरेर। राजा प्रताप मल्लले ढु the्गाको चित्रको डिजाईनको आदेश दिएपछि त्यस्ता मूर्तिहरू अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ। यो तस्विर हो किनकि यसैले चतुर्भुज मोहनकाली चौक भनिन्छ।
दरबारको उत्तरी सिमानामा रहेको बरामद एकदमै प्रख्यात मानिन्छ। जब राजा आफ्नो मृत्युको ओछ्यानमा थिए, उनी यहाँ सुनहरी चन्दवामुनि लगिनेछन्। सुनौलो चन्दमा उनले देवीदेवताहरूको चित्रहरू समावेश गर्दछ जुन उनले आफ्नो जीवनमा बिताए, उनको निर्भरता र मृत्युदरको सम्झनाको रूपमा, सुनौलो चित्रहरूमा। उत्तरी पर्खालमा, राजा प्रताप मल्लको एक लामो शिलालेख छ - यसले देवीदेवताहरूको पूजा कसरी गर्ने भन्ने बारे विस्तृत सल्लाहकारको रूपमा काम गर्‍यो। माथि, शिलालेखमा छविहरूका दुई पows्क्तिहरू छन्। पहिलो प row्क्तिमा भगवान विष्णुको दस अवतार र भगवान कृष्णको जीवन चित्रण गरिएको छ। दोस्रो प row्क्ति, तथापि, धेरै रहस्यमय छ। सम्पूर्ण चतुर्भुजको सम्पूर्ण धार्मिक वातावरणको विपरित, यसले सामान्य दिनदिनको जीवन देखाउँदछ। कसैलाई थाहा छैन कि छविमा उपस्थित को आकृति को प्रतिनिधित्व गर्दछ। केहि छविहरुमा, त्यहाँ एक व्यक्ति को दृश्यहरु छन् जो राजा प्रताप मल्ल जस्तै देखिन्छन्। सब भन्दा आश्चर्यजनक तथ्य भनेको पश्चिमी लुगा लगाएका मानिसहरू उपस्थिति हो किनभने यस्तो विश्वास छ कि काठमाडौं उपत्यकाले त्यस अवधिमा पश्चिमी सभ्यतासँग सम्बन्ध स्थापित गरेको थिएन।
सुन्दर चोक (कालियदमन चोक)
एक माध्यमिक आवासीय चोकको रूपमा विशेषत: मल्ल रानीहरूद्वारा प्रयोग गरिने सुन्दर चोकमा मोहन चोकजस्तै स्वर्ण धारा रहेको छ जसको अगाडि कालियदमनको विशाल पत्थरको मूर्तिकला छ । थप रूपमा, यस चोकमा रहेका झ्यालहरू र ढोकाहरू हनुमानढोका दरबार परिसरहरूमा रहेका झ्यालहरू तथा ढोकाहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ठ उदाहरणहरूमा पर्दछन् . . .
राजदरबारको बाहिरी परिसरमा जलद्रोनी पछाडि मोहन चौकबाट सुन्दरी चौक अवस्थित छ। यो प्रायः मोहन चौकको एक भित्री भागको रूपमा निर्माण गरिएको थियो। त्यसकारण, यो मोहन चौकको पश्चिमी मोर्चाको ढोकाबाट भित्र पस्न सकिन्छ।
डिजाइनको हिसाबले सुन्दरी चौकसँग मोहन चौकसँग धेरै समानताहरू छन्। यो लगभग मोहन चौक को एक स्केल डाउन संस्करण जस्तै देखिन्छ। उक्त शिलालेख अनुसार यो १ Prat०7 सालमा राजा प्रताप मल्लले आफ्नी श्रीमतीको नाममा निर्माण गरेका थिए। सुन्दर चौकको काठ वास्तुकला एकदमै सुन्दर छ। उनीहरूले नेपाली कलाकारहरूको मौलिक लकड़ीको शिल्पलाई दर्शाउँछन्। उत्तरी पखेटाको दोस्रो तलामा, एक सुन्दर तीन अनुहारको सनज्याल देख्न सकिन्छ जुन दुई छेउ छेउ थाकु झ्यालसँग छ। दुर्भाग्यवस, यद्यपि चतुर्भुजको अधिकांश भागहरूमा काठको वास्तुकला अक्षुण्ण छ, हामी दक्षिणी र पश्चिमी वि in्गमा यी सुन्दर शिल्पकलाहरूको कुनै पनि अवशेष पाउन सक्दैनौं।
मोहन चौक जस्तै, सुन्दरी चौक पनि एक सुनहरा पानी टाउको छ। यो पानी ट्या tank्की, वा जलद्रोनी (सायद यो जलद्रोनी पछाडि किन निर्माण गरिएको हो भन्ने कारणले गर्दा), शहर भित्र ट्याप प्रणाली स्थापना हुनुभन्दा अघि भर्न प्रयोग गरिएको थियो। पानीको गुत्थीको वास्तुकला फेरि मोहन चौकसँग मिल्दोजुल्दो छ र जनावरहरू पानीको टुप्पोमा पुग्न टम्बलिंग गर्दै आएका छन्। यस गुहाराको शीर्षमा सानो गुम्बाज शैलीको मन्दिर छ। यद्यपि मोहन चौकसँग अचम्मको समानता भए पनि सुन्दर चौकमा देवीदेवताहरूको छवि संख्या कम छ।
सुन्दर चौकाको सब भन्दा दर्शनीय पक्ष भनेको कालियदामन मूर्ति हो। यो नेपालमा मात्र होइन सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपमा ढु stone्गाको वास्तुकलाको प्रतिस्पर्धी कृति हो। यसमा भगवान कृष्णले दुष्ट सर्प कालियालाई वशमा राखेको कथा चित्रण गरिएको छ। कला यति सुन्दर छ कि भगवान कृष्णको रूप यो चलिरहेको जस्तो लाग्छ। दुर्भाग्यवस, कसैलाई थाहा छैन कि कसले यो बनायो। राजा प्रताप मल्लले यो शहरमा यात्रा गर्दै गर्दा भेट्टाए र उनले त्यसलाई दरबारमा स्थापित गरे। यो मूर्ति लगभग -००-7०० बीएस कतै विकसित गरिएको छ भन्ने विश्वास छ।
भुईँमा छापिएका ईंटाहरूले देखाएझैँ मल्ल युगको मूल कला र वास्तुकलालाई पूर्ण रूपमा कायम राख्ने एउटै मात्र चोक, मूल चोक मल्ल राजकुमारहरू तथा राजाहरूको व्रतबन्ध, विवाह, राज्यारोहण, र राज्याभिषेक जस्ता जीवनका प्रमुख पलहरूका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । यसको धुरीचाङ्गमा रहेको खोपडीको श्रृङ्खलाले सङ्केत गरेनुसार यस चोक तान्त्रिक द्रिष्टिबाट ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको छ . . .
मूल शब्द शाब्दिक शब्द प्रिंसिपलमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। मूल चौक, जसरी यो नामले जनाएको छ मुख्यतया दरबारमा भएका सबै धार्मिक धार्मिक समारोहहरू र धार्मिक रीति, विवाह समारोह, मुकुट राजकुमार र मुख्यमंत्रिको लगानीका साथै राजाको राज्याभिषेक समारोहको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो।
मन्दिर महेन्द्र मल्लले १ 1564। ईडीमा बनाएका थिए। यद्यपि मन्दिरको बारेमा पहिलो अंश १ 16२27 ईस्वीको आसपास मात्र भेट्न सकिन्छ। १ 170० AD ई। मा, राजा भास्कर मल्लले मन्दिरलाई पुनः निर्माण गरेको हुनुपर्छ, जुन अहिलेको उपस्थिति प्रदान गर्दछ।
वास्तुकलामा, सम्पूर्ण चतुर्भुज प्रायः बिहार जस्तो लाग्छ जुन देवी तलेजुको लागि निर्माण गरिएको हो। उनको निशान जताततै देख्न सकिन्छ - स्ट्रूट्स देखि शिलालेख सम्म पर्खाल मा नक्काशी गर्न। मल्ल युगको एक प्रकारको काठ वास्तुकलाको प्रतिनिधित्व गर्ने स्ट्रुट्सले चंडीको कथाबाट तलेजु देवीको कथा चित्रण गर्दछ। वास्तवमा, मन्दिरको दक्षिणी भाग यसको सानो, तर एकदम सुन्दर छ, त्रिशूल चौकमा रहेको तलेजु मन्दिरको संस्करण। यो आँगनको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शाखा मानिन्छ। दशैंको पर्वको बेला जब मानिसहरूले तलेजु भवानी जाने अवसर पाउँछन्, देवीको मूर्ति यस सानो मन्दिरमा नै राखिन्छ। केन्द्रीय खुला ठाउँ बलिदानहरू प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ - जस्तै भैंस र बाख्रा - देवीलाई दशाइनको बखत।
मल्ल शासकहरूको मनपर्ने देवी तलेजु भवानीको विशाल मन्दिरका लागि सबैभन्दा धेरै चिनिने यो चोक मन्दिरको तल राखिएको त्रिशूलको नाममा राखिएको छ । त्यस त्रिशूल देवीको दिव्य शक्तिको प्रतीक हो . . .
विशाल त्रिशूल चौक मूल चोक र दशेन चौकको उत्तरी ढोकाबाट भित्र पस्न सकिन्छ। वा, दशैंको चाडको समयमा, मानिसहरू दरबारको बाहिरी स्कर्टमा रहेको सिंह द्वार हुँदै आँगनभित्र छिर्न सक्छन्। आँगनलाई केहि ऐतिहासिक कागजातहरूमा "त्रिशुल रवी" पनि भनिन्छ।
त्रिशुल चौकको सब भन्दा देखिने पक्ष भनेको मल्ल राजाहरूका शक्तिशाली - र मनपर्ने देवी - तलेजु मन्दिरको भव्य मन्दिर हो। मन्दिरको फेदमा रहेको त्रिशूल, जुन शक्तिको प्रतीकको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, आँगनलाई त्रिशूल मन्दिरको नाम दिनका कारण भएको छ।
त्रिशूल चौकमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनीहरूले गुम्बज शैलीमा निर्माण गरिएको संरचना देख्न सक्दछन्। यद्यपि यो स्मारक पहिलो हेराईमा मन्दिरजस्तो लाग्न सक्छ, वास्तवमा यो त्यस्तो संरचना हो जुन देवीलाई आराधना गर्ने प्रस्ताव राखिन्छ। अग्नि साला बाहेक एक दबली पनि छ। मल्ल शासकहरूको युगको दौडान यो विभिन्न सांस्कृतिक नृत्यहरू प्रदर्शन गर्ने र प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हुने गर्थ्यो।
आँगनको बीचमा, हामी कछुवाको माथि उभिरहेको तीन विशाल स्तम्भहरू देख्न सक्छौं। पहिलो - पहिलो हो - राजा प्रताप मल्लले १ 17२० बीएसमा बनाएको थियो। दोस्रो - प्रताप मल्लको एक पछिल्तिर राजा पार्थिवेन्द्र मल्लले निर्माण गरेका थिए। यी दुबै स्तम्भमा राजाहरूले आफ्ना सम्बन्धित परिवारका साथ देवीलाई प्रार्थनापूर्वक श्रद्धालु ढंगमा प्रार्थना गर्दछन्। तेस्रो - र अन्तिम - स्तम्भले पखेटा सिंहहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसले यो दर्शाउँछ कि यो मल्ल युगको दौरान एक महत्वपूर्ण वास्तु प्रतीक थियो।
दसैँ चोकमा दसैँ घर अवस्थित छ, जुन शाही जमारा (दसैँ पर्वमा उम्राइने घाँस जुनलाई दीर्घायु र सफलताको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ) राखिने भण्डार हो । त्यहाँबाट जमारालाई नारायणहिटी दरबारमा पठाइन्थ्यो, जहाँबाट जमारालाई शाही परिवारले सर्वसाधारण जनतालाई लगाइदिने गरिन्थ्यो . . .
मूलचौक, लोहान चौक, भण्डारखाल बगैचा र त्रिशूल चौकसँगै रहेको दसैच चोकलाई चतुर्भुजस्थित दशाइन घर भनिन्छ। दशेन घर शाही जमारासको लागि भण्डारगृहको रूपमा निर्माण गरिएको थियो जुन दशैंको उत्सवको समयमा हुर्केको प्रजातिहरूको प्रजाति हो, जसले दीर्घायु र सफलताको लागि संकेत गर्दछ।
वास्तुकलाको रूपमा, त्यहाँ चतुर्भुजमा कुनै महत्त्वपूर्ण कलाकृति वा संरचनाहरू छैनन्। यद्यपि आँगनमा दुई महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू छन् जुन ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छन्:
१) चन्द्रुनारायण मन्दिरबाट पूजा गर्नका लागि प्रत्येक दशैं पानी ल्याउने फूलदानको लागि सिट २) इनार, जसले देवी तलेजूलाई बलिदानको लागि शुद्ध पानीको स्रोतको रूपमा काम गर्दछ। पानी तान्न आँगनको मध्य भागको नजिकै सीढाहरूको उडान डिजाइन गरिएको छ, र मूल सिँढीको स्तरमा बीममा दुईवटा सुन्दर सिंह खोपिएको छ।
लोहँ चोक (वसन्तपुर चोक)
मल्ल शासकहरूको मोहन चोक अनुरूप राजा पृथ्वी नारायण शाहले निर्माण गरेको यस चतुर्भुजी चोक शाह शासकहरूका लागि आफ्नो वासस्थान रहेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाका चार शहरहरूको नाममा राखिएको चोकको चारवटा टावरहरू अद्वितीय चौक्वाथ वास्तुकला शैलीमा डिजाइन गरिएको छ . . .
मुल चोकदेखि दक्षिण र नासील चौकमा दक्षिण पश्चिम रहेको लोहान चौकलाई नेपाली काठको वास्तुकला सुन्दरताको प्रतीकको रूपमा चिन्न सकिन्छ। यो चतुर्भुज कभर ढु stone्गा फुटपाथबाट यसको नाम लिएको छ। लोहान शब्दशः ढु stone्गामा अनुवाद गर्न सकिन्छ; यसैले नाम लोहान। शाह शासकहरूले संरचना निर्माण गर्नु अघि यो तेजराथ अड्डाको घर थियो; यसैले यसलाई तेजराथ चौक पनि भनिन्छ। शिलालेखहरू र कागजातहरूका अनुसार शाह शासकहरूले आँगनलाई बसन्तपुर टावर भनेर बोलाउन रुचाए।
लोहान चौक चौकोथ शैलीमा बनेको छ (चार टावरहरू चौगुना चार कुनामा)। यो विश्वास छ कि राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं शहरलाई आफ्नो आवासीय क्वार्टरको रूपमा कब्जा गरेपछि यी सबै चार टावरहरू बनाए। त्यसबेलादेखि शाह राजाहरूले नारायणहिटीमा आवासीय घरका रूपमा बसाई हुनु अघि उनीहरूको राजतन्त्रको युगभरि लोहान चौक प्रयोग गर्थे।
यद्यपि लोहान चौकामा चारवटा टावरको निर्माणको सम्बन्धमा हामी राजा पृथ्वीवि नारायण शाहको योगदानका मात्र नभई विभिन्न प्रमाणहरू पाउन सक्छौं। राजा काठमाडौं आइपुग्नु अघि नै विभिन्न कागजातहरू टावरको उपस्थितिलाई औंल्याउँछन्। तिनीहरू सानो थिए, तर यो विश्वास गरिन्छ कि टावरहरू पहिले नै अवस्थित छन्। धरहरा भए पनि लोहान चौकीको पर्खालमा कुँदिएका शिलालेखहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि राजा पृथ्वीनारायण शाहले केवल बसन्तपुर टावर र बिलास मन्दिर पूरा गर्न सकेका थिए। अन्य दुई टावरहरू लक्ष्मी बिलास टावर र कीर्तिपुर टावर राजा प्रताप नरसिंह मल्लले निर्माण गरिसकेका छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ।
वास्तुगत रूपमा, टावरहरूको काठकाम अतुलनीय छ। राजा पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रवादी नीतिमा विश्वास गर्थे। उनले नेपाली कलाकारहरुलाई नेपाली उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहित गरे किनकि उनी सोच्छन् कि यो प्रगतिको बाटोतर्फ पहिलो पाइला हो। यसैले लोहान चौकाको पर्खाल र ढोकालाई प्रामाणिक नेपाली काठशिल्पले सजिएको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी भुईं भुइँमा बीममा काठको काम र टावरहरूको विन्डो कुनै पनि दर्शकका लागि दर्शनीय दृश्य हुन्छन्।
दाख चोकको नाम बङ्गाली दाखबाट आएको हो । यहाँ दरबार परिसर स्थापना हुनुभन्दा पहिले अङ्गुर खेती गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसैले यसलाई दाख चोक भन्ने नाम दिइएको हो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने मल्ल युगबाट यहाँ कुनै अवशेषहरू भेटिएका छैनन् । हामी केवल यस चोकमा शाह शासन्णको प्रभाव देख्न सक्छौँ . . .
यो चतुर्भुज राजा पृथ्वी विर विक्रम शाहदेखि राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको शासनकालमा धेरै लोकप्रिय थियो। चतुर्भुजको उत्तरी भागको माथिल्लो तलामा राजा पृथ्वीवि नारायण शाहदेखि राणा प्रधानमन्त्री - जंग बहादुर राणा सम्मका छविहरू छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, दरबारको अन्य सबै चतुर्भुजहरूको विपरित, पश्चिमी भागमा कुनै भवन छैन। त्यहाँ केवल एक पर्खाल हो जसले डाक चौकलाई मसान चौकबाट अलग गर्दछ।
वास्तुगत रूपमा, डाक चौकको आधारमा काठका मूर्तिहरू खासै सुन्दर छन्। तिनीहरूमा क्यापरिकन, टाइगर टाउको, र सर्प कुँदिएका वस्तुहरू छन्, जुन प्रायः काठको बीमबाट बाहिर निस्किरहेको जस्तो देखिन्छ।
मसान चोक (कन्हेहोल चोक)
देगु तलेजु मन्दिरका लागि प्रसिद्ध, यस चोकको नामले धेरै ध्यानाकर्षण गर्दछ । मसानलाई शाब्दिक रूपमा शम्शानघाट भनेर अनुवाद गर्न सकिन्छ, र यस कारण यसलाई राजकीय मसान भनेर पनि धेरैले टिप्पणी गरेका छन् जुन कुरालाई यहाँ रहेको तुलसीको रूखले अझ सुदृढ गर्दछ । तर कुनै पनि ऐतिहासिक कागजातहरूले यसको बारेमा चर्चा गरेको पाईँदैन, र यो केवल एउटा शहरी कथा बन्न पुगेको छ . . .
चतुर्भुजको पश्चिम तिरको पर्खाल (दाख, यहाँ) मासन चौकलाई डाक चौकबाट अलग गरिएको छ। यसलाई कान्हेल चौक पनि भनिन्छ। वास्तवमा, मल्ल युगमा, यो कन्नेहोल चौक बन्न थाल्यो किनभने त्यहाँ केही प्रजातिहरूको फूल - कार्बीर फूलहरू थिए - जुन त्यहाँ उब्जनी हुन्थ्यो। नेवारीमा कार्बीरलाई कान्होल भनिन्छ। त्यसकारण, चतुर्भुजको नाम कान्हेल चौक भयो।
चतुर्भुजको विशेष नामको कारण - मसान र कान्हेल दुबै - यसले धेरै ध्यान खिचेको छ। यस्तो मानिन्छ कि चतुर्भुज लोकरहरूमा शाही कब्रिस्तान प्रयोग गरिन्थ्यो। यद्यपि तथ्यलाई प्रमाणित गर्न त्यस्ता कुनै कागजात वा प्रमाणहरू अवस्थित छैनन्। वास्तवमा त्यहाँ स्पष्ट शिलालेखहरू छन् जुन मल्ल शासकहरूलाई पशुपति क्षेत्रमा जलाइएको थियो भन्ने तथ्यलाई समर्थन गर्दछ। यो मात्र हो कि नाम भ्रामक छ।
आंगनको बीचमा नाट्येश्वरको मन्दिर छ - नाचका देवता। कागजातहरूले वास्तवमा देखाउँदछ कि यो चतुर्भुज, यो एउटा कब्रिस्तान हो भन्ने विश्वासको विपरित हो, शाही नृत्य घर थियो। शासकहरू नृत्यकर्मीहरूलाई आमन्त्रित गर्थे, र तिनीहरूले नाट्येश्वर मन्दिरको अगाडि नृत्य प्रस्तुत गर्थे।
मन्दिरको बारेमा सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँ उठाइएको सुनौलो प्लेटफर्म हो। पुरानो प्लेटफर्म विनाशको छेउमा पुगेपछि यो राजा १ Prakash१ BS मा राजा जय प्रकाश मल्लले निर्माण गरे। यो मञ्च ऐतिहासिक मात्र होइन सांस्कृतिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो तांत्रिक अभ्यास अनुसार नै निर्माण गरिएको छ जुन नाट्येश्वर देवताको पूजा विधिहरु संग मिल्छ।
न्हुल छेँ चोक
न्हुल छेँ चोकले एउटा ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा विजय प्राप्त गरेपछि राजा पृथ्वी नारायण शाह यसै चोक हुँदै हनुमानढोका दरबारमा प्रवेश गरेको कुरा विभिन्न अभिलेखहरूमा उल्लिखित छ । यो बहादुर राजाको निवास क्वार्टर थियो । अहिले पनि उहाँको बेडशिटहरूलाई यस चोकमा सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएको छ, र तिनीहरूलाई अत्यन्त सावधानीका साथ सुरक्षित गरेर राखिएको छ . . .
गद्दी बैठाक जाने ढोकामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तिनीहरू नुहला चेन चौकमा पुगे। यो आँगन सबैभन्दा लोकप्रिय भएको छ किनभने पहिलो आँगन राजा पृथ्वीवि नारायणले काठमाडौं शहर जित्नुभएपछि पहिलो पटक प्रवेश गरे।
आँगन को शुरुवात को बारे मा, कसैलाई सही मिति थाहा छैन। यद्यपि शिलालेखहरू अनुसार यो राजा जयप्रकाश मल्लको शासनभन्दा पहिले थियो। शब्द नुहला चेनको अर्थ "नयाँ घर" हो। यो दिइएको छैन किनकि राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो नयाँ घर त्यहाँ ल्याए, किनकि प्राय जसो मानिसहरूले आशा गर्न सक्छन्। यो दिइएको थियो किनकि आँगन जानाजानी बनाइएको थिएन अर्थात् आँगन वरपरको स्मारक र संरचनाहरूको निर्माणको कारण अस्तित्वमा आएको थियो।
वास्तुको दृष्टिकोणबाट हामी यो पत्ता लगाउन सक्दैनौं कि नुहला चेन चौक मूलरूपमा कस्तो देखिन्थ्यो किनकि हामीसँग न त कागजात छ न त फोटोग्राफहरू यसका बारे कुरा गरिरहेका छन। यसबाहेक, आँगन आफै नै धेरै अवधिको पुनर्निर्माण भयो, त्यसैले यसले आँगनको मूल वास्तुकलाको हाम्रो विचारलाई सीमित गर्दछ। उदाहरणका लागि, राणाका प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले नुला छेने चौकबाट पुरानो काठको घर हटाएर नयाँ घर पुनर्निर्माण गरे। पछि राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको शासनकालमा उक्त घर ध्वस्त पारियो र नयाँ नव-शास्त्रीय राजसी गद्दी बैठाकको निर्माण गरियो। यसले राणा र शाह शासकहरूको लागि विदेशी राजदूतहरूको साथ भेट गर्ने ठाउँको रूपमा काम गर्‍यो।
नुहला चेन चौकमा फर्कदा, समय बित्दै जाँदा संरचना बारम्बार परिवर्तन भएको छ, हामी अझै पनि पुरानो समय देखि वास्तुकला केहि देख्न सक्छौं। विशेष गरी कौशी तोसाखानामा विन्डोजहरू। तिनीहरू बिल्कुल शानदार छन्।
कौशी तोसखाना वास्तवमै प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि शाह खर्चको कागजात जस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरू भण्डार गर्न भण्डार गरेका थिए।
अर्को महत्त्वपूर्ण, र सम्भवतः सबैभन्दा प्रख्यात, नूला छेन चौकमा कला पृथ्वी राजा नारायण शाहको ओछ्यान थियो। काठमाडौं शहरमा विजय पाएपछि उनले महलमा आफूलाई स्थापित गर्नु भन्दा पहिले यहाँ केही रात बिताए। आज पनि, उसका बेडशिटहरू सावधानीपूर्वक त्यहाँ सुरक्षित छन्। तिनीहरू धेरै सरल छन् र डिजाइनका लागि नेपाली स्थानीय हस्तकला काम प्रयोग गर्दछ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले फेरि आफ्नो जीवन शैली मार्फत राष्ट्रवादी नीति प्रदर्शन गरेका छन्। पलंग माथि, हामी देवीदेवताहरूको भित्ते कला को एक शानदार दृश्य देख्न सक्छौं। यो विश्वास छ कि राजाले त्यो कोठा छनौट गरे किनकि उनी ओछ्यानमा जाँदा र बिदा हुने बित्तिकै प्रार्थना गर्न सक्थे।
वायु चोक (लामो चोक)
सबै चोकहरूमध्ये वायु चोकलाई यसका बारे रहेको जानकारीको अभावका कारण सबैभन्दा रहस्यमय मानिएको छ । तदापि, यसको नाम चोकको दक्षिणी भागमा रहेको वायु देवताको मन्दिरबाट आउँदछ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने यसलाई लामो चोक पनि भनिन्छ किनकि यसको आकार लामो रहेको छ . . .
डाक चौकको दक्षिणमा र पश्चिम नुहला चेन चौकमा अवस्थित बायु चौकले यसको नाम वायु देवता मन्दिरबाट निकालेको छ जुन आँगनभित्र अवस्थित छ। मन्दिर, पहिलो हेराईमा, घरको समानता देखिन्छ। यो शिखरमा सुनौलो गजुरा नभएको भए हामीले यसलाई मन्दिरको रूपमा चिन्न सक्ने थिएनौं होला। यो यसको अर्को नाम, लामो चौक, यसको लामो आकार बाट व्युत्पन्न।
ऐतिहासिक कागजातहरूको अभावका कारण बायु चौकको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। जे होस्, एउटा तथ्यले हामीलाई मन्दिरको सम्भावित उत्पत्तिको बारेमा जान्न दिन्छ। बीएस १ 17१० को एक कागजातले राजा प्रताप मल्लले हवाई देवतालाई प्रार्थना गरेको बारेमा थोरै बताएको छ। यसले १ 17१० साल अघि मन्दिर अस्तित्वमा रहेको भन्ने संकेत गर्छ।